ထိုအ Apg29 အပေါ်မှတ်ချက်များအတွက်အချို့သော ne
တစ်ဦးရုပ်ပြောင်အဖြစ် Christer Åberg။
အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့တူပုံပေါ်ဘယ်တော့မှသောဖက်ရှင်တန်းစီအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုရှာဖွေတဲ့သူ: မယုံနိုင်စရာပါကအသံစခွေငျးငှါအဖြစ်အနည်းငယ် (အနည်းငယ်မှတ်ချက်) ရှိပါတယ်။
ထိုအ Apg29 အပေါ်မှတ်ချက်များအတွက်အချို့သော netiquette ။
1️⃣တခါတရံမှာကောင်းတဲ့လူတွေမှတ်ချက်များအတွက် loggerheads ထံသို့လာကြ၏။ အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျဆွေးနွေးခြင်းစတင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်မသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အမြင်, ထို့နောက်ကောင်းသောရေးပါ။
2️⃣မှတ်ချက်များအတွက်မသင့်လျော်ရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါကသင်သည်ငါ့ထံသို့အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို deletade မှတ်ချက်များကိုအမြဲ deletade တက်ယူခြင်းအားဖြင့်ဆုခခြဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်များ။ မှတ်ချက် deletad အဘယ်ကြောင့် Apg29 ကရှင်းပြသည်ဘူး။ ဤသည် Self-နားလည်မှုဖြစ်သင့်သည်။
သငျသညျ (Christer Åberg) Apg29 ဝေဖန်သို့မဟုတ်ငါ့အကွောငျးဆှေးနှေးဖို့လိုတယျဆိုရငျ3️⃣, သင်ဒီမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားလုပ်ပေမယ့်လို့မရပါဘူး။
4️⃣သင်ဖြည့်ညှင်းတန်းစီအတွက်ဟုမေးခဲ့ကြပြန်ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်မှတ်ချက်ဖို့ကိုချစ်မယ်လို့လျှင်, သင်ကောင်းကို Netiquette 🙂စောင့်ရှောက်ရန်သာအဘို့ဖြစ်၏။
5️⃣ခွင့်မပြုသင်တန်းမှားယွင်းတဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုဝါဒဖြန့်။ ဤသို့ပြုသူမှတ်ချက်များဖြည့်ညှင်းတန်းစီအတွက် deletade နှင့်ကတိပြုထားပါသည်။
ရုံဆောင်းပါးများကိုတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယျသို့ဆန့်ကျင်တတ်သူကို6️⃣ comment ကဒီမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားလုပ်ပေမယ့်လို့မရပါဘူး။
အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့တူပုံပေါ်ဘယ်တော့မှသောဖက်ရှင်တန်းစီအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာတွေ့သူကိုသာ❗️ကအသံစခွေငျးငှါ Incredible အဖြစ်, (အနည်းငယ်မှတ်ချက်) အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
❤️သို့သော်ကောင်းမွန်စွာပြုမူဖြစ်ကြောင်းနှင့်မျက်စိအဘို့မေတ္တာပါလသေံနှင့်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်အတူတကယ်ကောင်းသောထင်မြင်ချက်များရေးသားခဲ့သည်သူကိုသင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ပါတယ်! သငျသညျ Apg29 အပေါ်အလွန်ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုကိုဖန်တီးကာအံ့သြစရာအမွှေးအကြိုင်ဖြန့်ရပြီ!
✔️သင်တန်းအဲဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို bönesidan လွန်း။ သို့သော်တစ်ဦးbönesidaနှင့်မျှမတို့ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာသို့မဟုတ် "ပရင်တာစာမကျြနှာ" ရှိကွောငျးသတိထားပါ။ ဆုတောင်းပဌနာသို့မဟုတ်tacksägelseämnen deletas မဟုတျကွောငျးအရာကိုမဆို။
📝 Reader ကိုမေးလ်
သငျသညျခရစျယာအခြေခံမူအပေါ်ချမ်းသာအကြောင်းကိုပြောတစ်ခုခုရှိပါကငါတို့ကိုဤမျှ e-mail ကိုစာဖတ်သူစာရေးဆက်သွယ်ပါ! အီးမေးလ်အနည်းဆုံး 300 စကားလုံးများကိုဒါပေမဲ့ပိုကောင်း 500 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြစ်သင့်သည်။ ယရှေု, ကယျတငျတျောမူခွငျး, ဗတ္တိဇံတရားသည်ဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံနှင့် ပတ်သက်. သက်သေခံ, ပဌနာခြင်းနှင့်ယေရှုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ပြန်ပြော၏။ ဒါဟာကျနော်တို့တှငျနထေိုငျဤအချိန်အတွက်လိုအပ်သောပါ!
သငျသညျနိုင်ပါတယ် တိုက်ရိုက်-mail ကိုင Apg29 မှသို့မဟုတ်ဤအတွက်စာဖတ်သူက e-mail ကို print ထုတ် ပုံစံ ။
စာဖတ်သူကိုအီးမေးလ်များနှင့်မှတ်ချက်များကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆရှိသည်သတိရပါ။ ငါ share ကြပါဘူးတဲ့အမြင်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားလျှင်, သင်ကငါ့ကိုအပြစ်တင်လို့မရပါဘူး! "အသင်းအဖွဲ့အားဖြင့်ပွစျရှိသညျဟူသော" ( အကြွေးအသင်းအဖွဲ့ ) ကဒီမှာမပါဝင်ကြသည်!
ဤသည်ကိုလည်းငါ့အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုသက်ဆိုင်, ဒါမှမဟုတ်ငါနှင့်တူညီသောအမြင် share ကြဘူးငါ့စတူဒီယိုအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအင်တာဗျူးလျှင်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဝမျးသာသင်နှင့်အခြားသူများကိုငါ့ဘလော့ဂ် site ကို Apg29 နှင့်ငါ့အမျိုးမျိုးသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှာကြည့်သွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းကျွန်မနံနက်!
က humanly ဖြစ်နိုင်သောကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောတခြားသူတွေနဲ့ပျော်ရွှင်သူတို့ကို Share!
Vecka 19, onsdag 12 maj 2021 kl. 00:07